Ciidamada PSF ee Puntland oo jab xoog leh gaarsiiyeey Kooxda Daacish.[Video]
April 4, 2021 - Written by Editor
Qandala:-Ciidamada PSF ee Puntland oo Howgal qaatay 48-saac ku qaaday degaannada Baraagaha Madax Madow iyo Dhabancaddo ee Buuraha Cal Miskaat oo hoostaga degmada Balidhidin ee gobolka Bari ayaa lagu beegsaday goobo ay argagixisada Daacish ku sugnaayeen .
Howlgalkan oo u dhacay si guul leh ayay ciidamada PSF waxay jab xoog leh ugu geysteen cadowga Daacish ,iyada oo ay ciidamadu ka dileen dhagarqabayaasha Daacish in ka badan 24 xubnood.
Waxaa kale oo gabi ahaanba ay ciidamada PSF burburiyeen xaruntii ay Daacish halkaas ku lahaayeen oo ay ku kaydsanaayeen sahay iyo saanad badan oo ay Daacish lahayd isla mar ahaantaana waxay ciidamadu gubeen 2 gaari oo ay ku xireen argagaxisada Daacish qaraxyo diyaarsan, oo ay doonayeen in ay soo geliyaan magaalada Bosaso si ay ugu waxyeelaan shacabka aan waxba galabsan.
Intii howlgalkani socday waxaa jirey khasaare aad u kooban oo ka soo gaaray ciidamada PSF. Dadka reer guuraaga ah, bulshada kale ee ku nool degaannada howlgalka laga sameeyeyey iyo guud ahaan shacabka reer Puntland ayaa uga mahad celiyeen ciidamada amniga PSF howlgalladooda ay ku beegsanayaan argagagixisada.